सेरोफेरो : केएमसीको कोठा नम्बर ८
केएमसीको कोठा नम्बर ८
"दाई ट्वाइलेट कता छ होला ?" एक भद्र महिलाले सोध्छिन ।
"के म याँ ट्वाईलेट देखाउन बसेको हो ?" कुर्चिमा बस्ने चश्म र ढाका टोपी लगाएका एक बुढा कर्मचारी ज‌गिन्छन् । यि कर्मचारी अस्पताल आएका बिरामीको नाम दता गराउने र उनीहरुलाई सम्बन्धित कोठामा पठाउने काममा खट्टिएका थिए ।
गत बिहिबारको कुरा हो यो । विहानको ११ बजे आसपास । काठमाडौंकाे सिनाम‌ंगलमा रहेको काठमान्डु मेडिकल कलेजको सल्य चिकित्सा बहिरंग विभागको दृश्य हो यो । कोठा नम्बर ८ भित्र रहेको यो अोपिडीसँगै न्युरो तथा प्लाष्टिक सर्जरी जस्ता थुप्रै कोठाहरु पनि छन् । यि कोठाहरु विषेशज्ञ डाक्टरहरु र उनीहरुलाई भेट्न चाहने बिरामीहरुले भरिभराउँ हुने गर्छ । व्यवस्थित नहुँदा बिचको प्यासेजमा पनि मान्छेको घुइचो छ । बाहिर बस्दिनु बोलाउँला भन्दा पनि सुन्नेवाला छैनन कोहि । हुन त एक जनाले त्यती धेरै कोठाका बिरामीको नाम बोलाउनै पनि साध्य छैन । त्यसैेले पनि बिरामी उनको भर परेका देखिँदैनन् । सायद कारण यहि होला बाहिर कुरेर बस्ने भन्दा भित्रै आएर कोच्चिने र ढोकामै एकै घण्टा भएपनि उभिएर बस्ने धेरै थिए ।
बुढा बा र ति महिलाको भनाभनपछि बिरामी र उनका आफन्तहरु एकअर्कालाई हेर्न थाले । हुन पनि ट्वाईलेट भएको ठाउँका बारेमा बताउँदा बुढाको केहि जाँदैन्थ्यो । उनी यहि कारणले मात्र झोक्किएका भने हैनन् । सबै नियम अनुरुप नै हुँदा "पालो मिचेर बिरामी पठाउँने ?" भन्दै एक व्यक्त्ती बलपूर्वक डाक्टरको कोठा भित्र पसेपछि उनको पारो बढेको थियो । सायद ति भद्र महिला यसैको घानमा परिन ।
यो वार्ड भन्दा बायाँ तर्फ रहेको ल्याबबाट बेलाबेलामा माईकमा बिरामीको नाम बाेलाईरहेको सुनिन्थ्यो । रगत तथा दिसा पिसाब जाँचको लागि स्याम्पल बुझाउन पालो कुरिरहेकाहरु लाईनमा बस्नु पर्दैन्थ्यो । कुर्चीमा आराम गर्थे र नाम आएको बेलामा सोझै भित्र पस्थे ।
यो अोपिडीमा भने अघि देखिएक झै फरक तथा पट्यार लाग्ने दृश्यहरु थियो । माईकको व्यवस्था थिएन । आफै ढोकामा उभिनु र नाम सुन्नुको विकल्प पनि भरपर्दो थिएन । अझ पलपल हतारमा हुने मान्छेको जात, आधा एक घण्टा कुर्न पर्यो भने पनि ज्वोरै आउँला झै गरि कराउँथे ।
हुन पनि हामी धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यलयहरुका अस्तव्यस्त हालतबाट पिडित छौं । सरकारी अस्पतालमा ट्वाईलेट सफा राख्न, लामो लाईनको साटो कुपन सिस्टम सुरु गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन दिनुपर्ने दिन हामीले देखेका छौं । के दैनिक कार्यलय चाहार्ने व्यवस्थापनका कर्मचारीले समस्या देख्दैनन ? कि कोठा छाड्दैनन ? केएमसीको पनि यस्तो निरिह दिन नआवोस् भन्ने चाहना छ ।
अस्पतालले थोरै इच्छाशक्त्ती निकालेर ल्याबको जस्तै माईक सिस्टम राख्दिने हो भने न कोठा नं ८ पूर्ण व्यवस्थित हुन्थ्यो । हरेक डाक्टरको कोठामा माईक राख्ने हो र बाहिर एउटा स्पिकरको व्यवस्था गर्ने हो भने यी सारा तनाव कम हुन्थ्यो । बिरामीहरु कोठा बाहिर रहेको बेन्चीमा बस्थे । भित्रबाट नाम बोलाएपछि एक एक जान्थे । ल्याबमा भएको व्यवस्थापन सह्रानिय छ । कोठा नम्बर ८ मा यहि नहुँदा दिनहुँ डाक्टर, कर्मचारी र बिरामी बीच लम्किझम्कीको स्थिति बढेको छ । न्युन शुल्कमा र थोरै मेहनतमा गर्न सकिने यो काममा अस्पताल व्यवस्थापन चासो दिए धेरैको तनाव हल्का हुन्थ्यो कि ?